लक्ष्मी माताको कृपा प्राप्त गर्न घरमा राख्नुहोस् यी वस्तु | Mero Jyotish
के तपाईलाई थाहा छ हाम्रो जीवनमा सकरात्मक र नकरात्मक ऊर्जाको कति धेरै प्रभाव पर्छ ? घरमा सकरात्मक र नकरात्मक ऊर्जासँग जोडिएको चिजहरुको ब्याख्या गर्ने शास्त्र वास्तुशास्त्र हो। जान्नुहोस् वास्तुशास्त्रका अनुसार घरमा कुन कुन चिजहरु राख्दा तपाईको घरमा लक्ष्मीको बास हुनेछ?
वास्तुका अनुसार शंखमा वास्तु दोष हटाउने अद्भुत शक्ति हुन्छ, जुन घरमा शंख राखिएको हुन्छ त्यस घरमा सकारात्मक उर्जा रहन्छ । शास्त्रका अनुसार जुनको पूजा स्थलमा देवी लक्ष्मीको साथ शंखको स्थापना पनि गरिएको छ र पुजा गरिन्छ भने त्यहाँ स्वयं लक्ष्मी माताको वास हुन्छ र यस्तो घरमा कहिले पनि धनको कमी हुँदैन।
नरिवललाई श्रीफल भनिएको छ र यसलाई देवी लक्ष्मीको स्वरूप मानिन्छ । श्रीफलहरु मध्य एकाक्षी नरिवल निकै नै शुभ हुन्छ । जुन घरमा एकाक्षी नरिवल राखिएको हुन्छ र नियमित पुजा गरिन्छ, त्यहाँ धनको अभाव नहुने मान्यता छ।